Logitech Combo Kubata, yakanakisa keyboard kune yako iPad Pro | IPhone nhau
Luis Padilla | 04/08/2021 12:00 | iPad Pro, dzakawanda
Mushure memwedzi yakawanda ndichishandisa inoshamisa Apple Magic Khibhodi yeiyo Pro Pro, zvakaratidzika kunge zvakandiomera kuti ndiedze imwe keyboard iyo yaizondikurudzira zvakanyanya, asi chokwadi ndechekuti mushure memavhiki mashoma ndichishandisa iyo itsva Logitech Combo Kubata kweiyo iPad Pro mazuva ese 12,9 "kunyangwe zvichirwadza kuzvitaura, ikozvino ndasarudza kusiya iyo yeMicrosoft Keyboard mubhokisi rayo, uye ndinokuudza zvikonzero.
2 Yekhibhodi uye Trackpad
Iyi Logitech keyboard inoumbwa nezvikamu zviviri zvakasiyana zvakanaka: kavha yekumashure iyo inodzivirira yako iPad Pro kumativi ese uye kumashure, uye keyboard iyo zvakare iri yekumberi chivharo cheiyo kesi. Zvidimbu zviviri izvi zvakasununguka, uye zvinogona kupatsanurwa zvine runyararo, sezvo zvabatanidzwa nemagineti. Kungounza chimwe chikamu padhuze nechimwe, zvinobva zvabatana zvoga.
Zvinogona kutaridzika kunge zvisina basa, asi ndicho chimwe chezvinhu zvandinofarira zvakanyanya nezve iyi keyboard-kesi: unogona kushandisa yako iPad isina keyboard, usina kusiya dziviriro inopihwa nenyaya yacho. Iwe unogona kubvisa iyo keyboard mune yechipiri paunodaIwe unogona kana kuitendeudza nekuiisa kumashure, kuti ibate nemaoko ako. Paunenge uchida keyboard zvakare, sekondi imwe uye iri munzvimbo yakagadzirira kuenda.
Kavha yekumashure inovhara mativi ese uye kumashure kweiyo iPad, ichisiya maburi akakodzera maspika, maikorofoni, kamera uye USB-C chinongedzo chetafura. Chaizvoizvo aya maburi evatauri ndiwo anoona kuti inowirirana chete neiyo nyowani iPad Pro 12,9 ”2021, mumamodheru apfuura vangadai vasina kunyatsoenderana, kunyangwe zvikasadaro zvese zvinoshanda zvakakwana. Tichifunga iyi ndiyo yekutanga trackpad kiibhodhi Logitech yakaburitswa yeApple hombe iPad Pro, izvi zvishoma zvinonetsa zvinogona kusakunetsa.
Zvese zviri zviviri chifukidziro chekumberi neshure, pamwe nezvose zvakakomberedza kiyi uye trackpad, zvakafukidzwa negrey textile zvinhu nekubata zvishoma, zvinofadza kwazvo. Icho chinhu chinodzivirira kwazvo icho chiri nyore kwazvo kuchenesa. Icho chinhu chimwe chete icho mamwe makiyibhodhi echiratidzo anotakura, uye ini ndinogona kusimbisa kubva pane yangu ruzivo kuti inomiririra kufamba kwenguva chaizvo. Iyo yekunzwa kune iyo kubata iri nani kwazvo kupfuura epurasitiki yeMagineti Khibhodi, pasina kupokana.
Chimiro chiri kumashure, zano rakanak nekuti nenzira iyoyo haudi chikamu chekhibhodi kuti ubate iyo iPad, sezvazviri kune mamwe makirabhu. Inobvumira yakakora yekubata kona, kubva kuzere yakatwasuka kusvika padyo yakati sandara, yakanaka yekushandisa Apple Penzura. Zvinogona kusaburitsa chivimbo chikuru pakutanga, nekuti zvakaitika kwandiri nekhibhodi yangu yekutanga neiyi system, zvakare Logitech, asi inopokana zvakanyanya kupfuura zvaingaite. Uye zvakare, kubata kwacho kwakagadzikana, uye pasina skrini inofamba paunenge uchiishandisa, kunyangwe ukabata chidzitiro nemunwe wako.
Nekudaro, ino sisitimu ine drawback iyo inogona kuve yakakosha kune vazhinji: zvakaoma kwazvo, zvingangoita zvisingaite, kunyora neiyo iPad zvakananga pamakumbo ako. Ini handitombo shandisa iyo iPad seizvi, asi kana iri yako nzira yaunofarira yekuishandisa, zviri nani kuwana chinowanikwa kuti ukwanise kuiisa. Izvo zvakare zvinoita iyo iPad ine iyo keyboard yakavhurwa inotora inotora yakawanda nzvimbo, zvakanyanya kupfuura neMicrosoft Keyboard. Kukwana hakupo.
Ini ndakakanganwa kuwedzera kuti kesi inobvumidza iwe kuisa Apple Penzura munzvimbo yayo yekuchaja, kuburikidza neyakagwinya magineti system. Iyi Combo Kubata modhi haisanganisi iyo flap yemamwe mamodheru kuvhara keyboard uye kuvhara Apple Penzura, ichidzivirira kubva pakuwa netsaona. Saka, kungofanana neApple's Magic Keyboard, neiyi keyboard ini zvakare ndichafanirwa kutsvaga Apple Penzura muzasi mehombodo yangu Zvese zviviri zvevatatu.
Pane chinhu chimwe chete chandinosuwa nezveMicrosoft Keyboard: USB-C kubatana. Izvi zvinowedzera kuPad ​​Pro. Unogona kudzoreredza iPad yako uchibatanidza chinongedzo kuInc Pro Pro's USB-C. Asi hachisi chinhu chakaipa kufunga nezve iyo Pro Pro hupenyu hwakareba hwebhatiri.
Yekhibhodi uye Trackpad
Logitech yasarudza iyo Smart Connector kuti ishandise iyo Combo Touch. Izvi zvinoreva kuti nekuda kweiyo diki magineti chinongedzo kuseri kweiyo iPad yedu isu hatidi kuzowedzerazve keyboard, uye hatizofanirwe kushandisa kubatana kweBluetooth. Zvese zvinoshanda nekuisa zvese pane yayo saiti, pasina zvinongedzo kana mabhatiri. Kubudirira, kunyanya kana zvasvika kune backlit keyboard, iyo yatinoziva kuti mabhatiri ayo anowanzo gara zvishoma. Chero bedzi yako iPad Pro ine bhatiri, iyi Combo Touch inoshanda.
Iyo yakazara keyboard, ine yakajairwa kiyi saizi (backlit, isu tatozvitaura) uye ine rakakura rakakura trackpad, hombe kupfuura yeMicrosoft Keyboard. Iwo makiyi anoteerera kwazvo, nekufamba kushoma pane chero Logitech desktop keyboard iwe yawaedza, zvakanyanya sekiyi paMac kana iyo YeMicrosoft Khibhodi pachayo. Ini handigone kuudza musiyano unooneka kana uchitaipa nemakhibhodi maviri. Uye iyo trackpad yakanyatsogadzirwa, mumwe angati yakagadzirwa neApple pachayo, nekuti inoshanda senge chero MacBook. Iyo michina, uye inopindura kune chero keystroke, kunyangwe mumakona. Ehezve iri yakawanda-yekubata uye inobvumidza iwo mamwe maitiro seMicrosoft Keyboard's trackpad.
Uye pano panouya chimwe cheakakosha maficha ekhibhodi iyi: mutsara wemakiyi ekushanda pamusoro penhamba. Ini handinzwisise kuti Apple haina kuunza sei iwo mutsara wemakiyi pane yayo keyboard, nekuti ivo vakashaikwa zvekuti pavanongoerekana vakupa kwauri, hauchakwanise kuita usipo. Ratidza kupenya kudzora, tsvaga, backlight kutonga, kutamba uye vhoriyamu kutonga… Inotova nekiyi "yekumba" uye kiyi yekukiya iyo iPad.
Logitech yagadzira iyo Combo Touch keyboard kumira pachena panotadza iyo Magic Keyboard: dziviriro uye imwezve mutsara wemakiyi ekushanda. Kana kune izvi isu tichiwedzera kuti mune mamwe maitiro arikuenderana neApple keyboard, chokwadi ndechekuti zvidiki "zvikanganiso" zveiyi keyboard hazvigone kutitadzisa kutaura kuti iri, pasina kupokana, yakanakisa keyboard iyo inogona kutenga yePad Pro Pro 12,9 ”. Mutengo waro wakaderera zvakanyanya kupfuura Apple: € 229 zvakananga muApple Chitoro (link).
Yakatumirwa pa: 4 August 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 4 August 2021
Unhu hwezvinhu uye
Backlit yakazara keyboard
Yekuwedzera mutsara wemakiyi ekushanda
Hapana bhatiri kana Bluetooth
Multi-kubata trackpad ine yakanakisa mhinduro
Nyaya nekhibhodi zvinogona kupatsanurwa
Inoshaya yekuwedzera USB-C yekubatanidza
Inotora imwe nzvimbo kupfuura Magic Keyboard
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Logitech Combo Kubata, yakanakisa keyboard kune yako iPad Pro
Apple inomira kusaina iOS 14.7